नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गर्दै संयोजक भट्टराईले भन्नुभयो : सबै जनताको घर नबनेसम्म आफ्नो घर बनाउँदिन | नयाँ शक्ति नेपाल
नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गर्दै संयोजक भट्टराईले भन्नुभयो : सबै जनताको घर नबनेसम्म आफ्नो घर बनाउँदिन
बाँकी जीवन देशलाई समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता
३० जेठ २०७३
काठमाडौं । दशरथ रंगशालाबाट आइतबार घोषित पार्टी नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आफूहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिमा अर्जुनदृष्टि लगाउने बताउनुभएको छ ।
आइतबार दशरथ रंगशालामा नयाँ शक्ति पार्टीको औपचारिक घोषणा गर्दै उहाँले महाभारतका अर्जुनले चराको आँख ताकेको जस्तैनयाँ शक्तिले पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमा अर्जुनदृष्टि लगाउने बताउनुभयो । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ संयोजक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिमा अर्जुनदृष्टि लगाउँछौँ । यसअर्थमा हामी अरुभन्दा पृथक छौं ।’
२५ वर्षमा संसारकै धनी मुलुक
संयोजक भट्टराईले नेपाललाई २५ वर्षभित्र संसारकै धनी मध्येको एक मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘सात वर्षभित्र गरीबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने खाका हामी ल्याउँदैछौँ । त्यस्तै १५ वर्षभित्रमा मध्यमस्तरको विकासको चरणमा पुर्‍याएर बेरोजगारी पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय करिब ७ सय डलर छ, यसलाई कम्तिमा १० गुणा बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी २५ वर्षभित्रमा अर्थात मेरै जीवनकालमा (तपाईंहरुको जीवनकाल अझै धेरै बाँकी छ, त्यसैले मैले मेरै जीवनकालमा भनेँ) नेपाललाई संसारकै धनी मुलुक बनाउने खाका हामी ल्याउँदैछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले भिजन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले भिजन आवश्यक छ, त्यो भिजन हामीसँग छ । दोस्रो कुरा प्राकृतिक स्रोत र साधन हो,’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘विज्ञहरुको कुरा मान्ने हो भने नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई प्रतिव्यक्तिमा बाँढ्दा विश्वका १० धनी मुलुकमा नेपाल पर्नसक्छ ।’
साथै उहाँले विकासका लागि पुरातनवादी मोडल नभएर विकास पछिल्ला र नयाँ मोडललाई अघि सार्ने योजना स्पष्ट पार्नुभयो ।
बाँकी जीवन युवा पुस्ताकालागि सुम्पन्छु भन्दा अपराध हुन्छ ?
आफू गोरखाको अतिसामान्य किसान परिवारबाट आएर मुलुकको सर्वोच्च पद पुगिसकेको स्मरण गर्दै संयोजक भट्टराईले अब आफ्नो बाँकी जीवन मुलुक र युवा पुस्ताका लागि सुम्पने बताउनुभयो ।
आफूलाई ‘पुरानै मान्छे कसरी नयाँ हुन्छ’ भनिएकोतर्फ इंगित गर्दै संयोजक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘म गोरखाको अतिसामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेको मान्छे । हाम्रो देशमा त्यो भन्दा माथि पुग्ने ठाउँ छैन । मलाई यहाँ भन्दा माथि पुग्नु पनि छैन । मैले त आफ्नो बाँकी जीवन मुलुकका लागि, युवा पुस्ताका लागि अर्थात् मेरो छोरीको पुस्ताका लागि सुम्पिने प्रण गरेको हुँ । मैले आफ्नो बाँकी जीवन देशका लागि सुम्पिन्छु भन्दा कसरी अपराध हुन्छ ?’
आफ्नो घर बनाउने छैन
संयोजक भट्टराईले सबै नेपालीको आफ्नो घर नभएसम्म आफूले घर नबनाउने उद्घोषसमेत गर्नुभयो । ‘म आर्किटेक्ट (घरको नक्सा बनाउने मान्छे) पनि हुँ । मैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा धेरै घरको नक्सा कोरेको छु । तर, म यहाँहरुमाझ एउटा भिष्मप्रतिक्षा गर्न चाहन्छु, मैले आफ्नो घरको नक्सा बनाउने छैन । मुलुकमा धेरै नागरिक घरबारबिहीन छन् । सबै नेपालीको आफ्नो घर नभएसम्म बाबुरामले घर बनाउने छैन । निजी सम्पति जोड्ने छैन ।’
आउँदो निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पहिलो पार्टी
संयोजक भट्टराईले आफ्नो पार्टी कसैका विरुद्ध नभई समृद्ध नेपाल निर्माणार्थ खडा भएको उल्लेख गर्नुभयो । अब हुने स्थानीय निकायको निर्वाचन र आम निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने उद्घोष पनि उहाँले गर्नुभयो ।
'नेपालको पहिलो राजनीतिक खण्ड भौगोलिक एकीकरण, दोस्रो राजनीतिक स्वतन्त्रताले बितेकामा अबको तेस्रो खण्डमा समृद्धि र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, सात वर्षमा गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य, १५ वर्षमा मध्यमस्तरको विकास एवम् २५ वर्षमा नेपाललाई विश्वकै धनी देश बनाउन सकिन्छ,' उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षाको अभावमा नारी पछि परेको भन्दै उहाँले उदाहरणस्वरुप आफ्नी आमाको कारुणिक प्रसंग उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले महिलालाई समान र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा स्थायी शान्ति र लगानीको वातावरण बनाउन नयाँ शक्तिका साथ मिल्ने बताउनुभयो । नयाँ शक्तिको प्रशंसा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 'स्थायी शान्ति र लगानीको वातावरणले मात्र देशमा समृद्धि र विकासको सोचलाई पूरा गर्न सक्छ ।'
सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक नेतृत्वबिना आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो । नेता महराले नयाँ शक्तिले अगाडि सारेको समृद्धि र आर्थिक विकासको विकल्प निरासामा नबदलियोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संयोजक भट्टराईलाई केही गर्छु भन्ने अठोट भएको नेताको रुपमा चित्रित गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, काँग्रेस नेता प्रदीप गिरी र डा सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, राप्रपा नेपालका नेता सुशीलकुमार श्रेष्ठ, राप्रपाका सुनीलबहादुर थापा, भारतीय जनता दल युनाइटेडका महासचिव केसी त्यागी, भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका महासचिव एवम् विधायक डिपी त्रिपाठी, भारतीय बहुजन पार्टीका प्रवक्ता सुधीन्द्र भादोरिया, तिसरी दुनियाँका सम्पादक आनन्दस्वरुप बर्मा, नयाँ शक्तिका रामचन्द्र झा, दुर्गा सोब र पर्शुराम तामाङलगायतका वक्ताले नयाँ शक्तिको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।